#CODE - Koorso Dynamo oo loogu talagalay mashruucyada injineernimada ee BIM - Geofumadas
#CODE - Koorso Dynamo oo loogu talagalay mashruucyada injineernimada ee BIM
Naqshadeynta kumbuyuutarka ee BIM
Koorsadani waa hage saaxiibtinimo iyo isbarasho ah oo ku saabsan qaabeynta kumbuyuutarka adduunka iyadoo la adeegsanayo Dynamo, oo ah barnaamij barnaamij muuqaal oo furan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha.
Horumar, waxaa lagu horumariyaa iyada oo loo marayo mashaariicda halkaas lagu baran doono fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijyada muuqaalka. Waxaa ka mid ah mowduucyada aan kaga wada hadli doonno shaqada joomatikyada kombuyuutarrada, hababka ugu wanaagsan ee loogu talagalay qaabeynta ku saleysan qaanuunka, dalabka barnaamijyada ee naqshadeynta isdhaafsiga iyo waxyaabo badan oo ka badan Dynamo Platform.
Awoodda Dynamo waxaa lagu caddeeyay howlo kala duwan oo la xiriira naqshadeynta. Dynamo wuxuu noo oggolaanayaa:
Baadh barnaamijka ugu horeeya
Ku xir ka shaqeeya dhowr jilicsan
Raali noqo waxqabadka jaaliyadaha adeegsadayaasha, wax ku biiriyaasha iyo horumariyaasha
Kobcin madal il furan oo leh horumar joogto ah
Maxaad baran doontaa
Fahmaan fikradaha iyo suuragalka barnaamijyada muuqaalka
Fahmitaanka qulqulka shaqooyinka leh qeybaha jaantus ee gudaha Dynamo
Liisaska socodka iyo ilaha xogta ee dibedda leh Dynamo
Abuur joomateri hore sidii qalab shaqo oo loogu talagalay xalka adag oo cakiran
U adeegso Dynamo si aad uga dhigato howlaha ku dhaca Revit
U adeegso Dynamo si aad ugu abuurto moodallo wax ku oolla iyo kuwo is-waafajin kara gudaha Revit
Qeybta guud ee Revit (cabiraadaha nooca iyo tusaalayaasha)
Xisaab iyo joomatari aasaasiga ah
Yaa loogu talagalay koorsada?
Mooddeeyayaasha BIM iyo naqshadeeyayaasha
Farshaxaneyaasha, injineerada iyo farsamoyaqaannada la xiriira
Ku dhiirrigelinta tikniyoolajiyada BIM iyo barnaamijyada muuqaalka
Koorsada sidoo kale waxaa lagu heli karaa Isbaanish
Koorsooyinka BIM Koorsooyinka Qaababka BIM Koorsooyinka socodka socodka
Post Previous«Previous #BIM - Koorsada Koorsada Koorsada (Farsamada, Korantada iyo Dhuumaha)
Post Next #GIS - QGIS 3 koorso talaabo talaabo ah oo xoq ahNext »